Hoyga taraafikada ee qadka
Soo iibso si aad u bartilmaameedsan
Waxaan u diri karnaa taraafikadaaga:
MUUQAALKA MUUQAALKA BADAN
BAARLAMAANKA SAFARKA SARAAR
Iibso soo booqdayaasha shabakada ee dhabta ah
Waan ognahay sida ay u jahwareersan tahay in gaadiid badan la helo goobtaada. Xitaa haddii aad u maamusho inaad kaqeyb gasho, waa maxay ujeedadu haddii aysan diyaar u ahayn inay u beddelaan dhab ahaan, booqdayaasha shabakadda xiiseynaya?
Waqti iyo marlabaad waxaan aragnaa dadku oo lacagtooda oo dhan ku qarash gareeya suuqgeynta oo ay ku helaan taraafikada ugu yar boggooda internetka - Olole Facebook / Instagram ah ayaa kuu heli kara qaar jecel laakiin uma badna inuu u rogo taraafikada websaydhka / gujinta. Iyo sidoo kale in rajadooda iyo hamigooda ah inay noqdaan lix ama toddobo shirkad leh muuqaal ganacsi oo qiiq ku kacaya.
Weligaa ma dareentaa inaad ku soconayso isla isla jaanqaadkii?
Haddii aad tahay qof dhibic dareeye ah, oo kumanaan kun oo doolar ku xayeysiiyay Xayeysiiska ama milkiile ganacsi yar oo khariidaddaada internetka ka qaatay markii ugu horeysay; na maqal. Waan caawin karnaa!
Qaaciddada hogaaminta badan iyo iibka ayaan la mid ahayn sida dadka qaarkii u maleynayaan. Waxa aad u baahan tahay waa dheeraad ah Gawaarida Bartilmaameedka. Waxaad u baahan tahay booqdeyaal diyaar u ah inay gaaraan boorsooyinkooda, kala baxaan kaararka amaahda, oo iibsadaan waxaad iibineyso.
Sida ugu wanaagsan ee lagu heli karo taraafikada joogtada ah waa in shaqada laga tago.
KU SAABSAN KU SAABSAN AQOONSASHADA SIYAASADDA LACAG LA'AAN
LACAG KALE OO LACAG LA'AAN KU SAABSAN BILAHA XIGASHADA FACEBOOK
MAYA INAAD Iibsato "KOORSUR" KALE OO KAA BARAYA SIDA LOOGU SAMEEYO MILYAN
MAYA INAAD QAAR KA QAADATO QAAR KA MID AH "SULDAAN"
Marka Sidee Ayuu U Shaqeeyaa Bartilmaameedka Bartilmaameedka Websaydhku U Shaqeeyaa?
Haddii aadan weligaa maqlin taraafikada Jihada dib-u-noqoshada, waa sababta oo ah ma jiro waxa loogu yeero guru weligaa kaaga sheegi doono waxa ku saabsan - habka ayaa si fudud ula tartami kara ilaha taraafikada ee qaaliga ah oo faragalin ku yeelan kara faa'iidooyinka koorsooyinka ay iibinayaan.
Si kastaba ha noqotee, jihada dib-u-celinta taraafikada waa hab cajiib ah oo wax ku ool ah oo lagu helo taraafikada qadka leh ee ugu habboon ganacsigaaga. Taas micnaheedu waa in booqdayaasha websaydhka ee aad qaabisho waa dad horeyba u xiiseynayay dabeecaddaada ganacsi. Tusaale ahaan, macmiilka iibinaya qalabka gawaarida ayaa heli doona taraafikada laga soo diro goobaha baabuurta.
Waxaan u isticmaalnaa farsamooyin kaladuwan sida pop-unders, algorithms barashada, iyo sidoo kale barnaamijyada barnaamijyada warbaahinta laga iibsado ee laga helo xog uruurin ballaaran ee shabakadaha xayeysiinta. Intaa waxaa dheer, waxaan haynaa tiro koob xayeysiis ah oo badan oo ah domains iyo niche.
Iyada oo kor u kac ku yimid E-Ganacsiga iyo Hoos udhaca sanadihii la soo dhaafay, waxaan ognahay in adeegyadeena ay tahay inay si joogto ah isula jaan qaadaan waxa suuqa u baahan yahay. Taasi waa sababta kooxdeena khubaro ah ay si joogto ah u tijaabiyaan una wanaajiyaan nidaamyadeena iyagoo adeegsanaya tijaabinta tooska ah ee dadaalkeena R&D. Natiijada? Isugeynta tooska ah ee taraafikada tooska ah ee suurtogalka ah! Ka faa'iideysiga tiknoolajiyada ugu dambeysa ee AI (Artificially Intelligent), Waxaan u rogeynaa taraafikada ugu habboon niche (Tusaale ahaan, qof iibiya qalabka tiknoolajiyada ayaa ka heli doona taraafikada bogagga internetka / baloogyada)
Dhamaan taraafikada waa 100% bini aadam oo aad loo bartilmaameedsaday sidaa darteedna waxay kobcinayaan aragtida websaydhkaaga iyo fursadaha iibka.
Websaydhyada taxaddarka leh ee taxadir leh ee aan dooranay waxay ka shaqeeyaan inay toos ugu soo booqdaan booqdayaasha websaydhada ka soo jeeda IP-yada gaarka u ah waddanka aad rabto iyo sida wanaagsan. Waxaan ka hadlaynaa dalal badan oo kala duwan oo ku jira USA, UK, Yurub, Singapore, Aasiya, iyo Afrika. Iyada oo ka sarreysa suuqyada nuucyada ah ee '320', waxaan hubineynaa inaad hesho taraafikada bartilmaameedka sare leh, sidaa darteed kor u qaadidda sumcadda websaydhkaaga, iyo kordhinta fursadaha aan dhammaadka lahayn ee iibka.
Anaga ahaan dhankaaga, bartaada internetka waxaa ku xiran inay hesho aragti badan.
Waa kuwan sida loo bilaabi lahaa:
1. DHAMMAAN FOOMKA
2. AYAAN U HESHO SAXIIXADAADA
3. SITAAL BADBAAD iyo SIXIRIIS SIDII AAN KU HELI KARNAA HADAAN
Foomka dalabka ee aad ku buuxiso goobta jeegga ayaa na siisa faahfaahinta aan u baahan nahay si aan u fulinno dalabkaaga. Waxay qaadataa oo kaliya 30 sekan in la dhammaystiro.
Kahor intaanan bilaabin howsheena, waxaan hubineynaa inaan xaqiijino dalabkaaga adoo raacaya talaabooyinkeena amniga. Ku kalsoonow, ku weydiin mayno wax lambar sir ah - asturnaantaada aad bey muhiim noogu tahay!
Inta lagu guda jiro howsha xaqiijinta, waxaan xaqiijineynaa sharci ahaanta ganacsigaaga - ka dib oo dhan, waxaan wadnaa howlo sharci ah sidaa darteed waxaan fileynaa in macaamiisheenna ay sidoo kale noqdaan kuwo sarreeya! Taasi waxay ka dhigan tahay in goobtaadu ay sharci ahaan tahay xalaal. Websaydhkaagu ma lahaan karo wax basaasid ah, fayras, fayras ama dirxi ku jira dusha. Haddii aad amar ku bixiso websaydhada noocan ah, waxaan joojin doonaa ololahaaga taraafikada mana heli doontid soo-celinta.
Ilaa iyo intaad tahay shirkad sharciyeysan oo u hoggaansan shuruudaha iyo shuruudaha, codsigaaga waxaa lagu socodsiin doonaa saddex illaa afar maalmood gudahood!
Iyo voilà! Markaad gudbiso codsiga, ma jiraan wax intaas ka badan oo aad sameyn karto. Waxaad bilaabi doontaa inaad ku aragto taraafikada shabakadaada gudaheeda 3 illaa 4 maalmood codsigaaga. Iyo mid kasta oo ka mid ah hits ee aad hesho waxaa loo dammaanad qaadayaa inuu yahay booqde aadam ah oo dhab ah!
Khadka Tooska ah ee Niche wuxuu heystaa khibrad 2 sano ka badan
Waxaan ku shaqeynaa Shabakadaheena waaweyn ee Xayeysiinta Caalamiga ah. Shirkaddu waxay ku shaqeysaa shabakad ballaaran oo ka mid ah shuraakada xayeysiiska ee caalamiga ah ee gudbisa socodka internetka ee bini-aadamka dhabta ah, waxayna ku dadaashaa guusha macaamiishooda. Kooxdayadu waxay shaqaaleysiisaa karti sare, oo ay ku jiraan shaqsiyaad ka soo shaqeeyey magacyada ugu waaweyn xagga teknolojiyada iyo xayeysiinta.
Waxaan nahay meesha koowaad ee tirada dhabta ah ee taraafikada internetka iyo bartilmaameedka booqdayaasha.Waxaan ku faanaa shaqadeena si aan u hubinno tayada ugu sarreysa iyo u habboonaanta taraafikada webka aadanaha.
Taasi waa waxa inaga dhigaya PREFERRED isha wadista taraafikada, E-Commerce iyo ganacsi kasta oo kale oo leh joogitaanka internetka. Ilaa hada, waxaan siiney taraafikada inka badan 50,000 dukaamo oo khadka tooska ah ah, oo ku yaal meelo badan oo ay ka mid yihiin Shopify, Clickbank, Etsy, Ebay iyo Amazon. Ha walwelin - waan ku daboolnay!
Iibsiga taraafikada ee Niche Online Traffic kaliya macnaheedu maahan kor u qaadis wax ku ool ah joogitaanka ganacsigaaga ee internetka, laakiin sidoo kale adeegga macaamiisha ugu sareeya.
Mar alla markii aad doorato Wadada Khadka Tooska ah ee Niche, waxaad ka heli doontaa qaabkeenna mid ahaanta u ah midka ugu fiican ee aad doorato.
Goobaha Warshadaha daboolan (kuma eka):
Gaadiidka Gawaaridaada / Goobta Waxyaabaha Aad Ka Socoto
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrency': ICO / IEO / STO
Hanti / Guri Guri
Shukaansi & Xiriir
Dhirta / Vaping
Hay'adaha Dijitaalka / Hal-abuurka
Ganacsiyo badan oo kale oo B2B iyo B2C
U dhaaf ganacsigaaga shabakada Khubarada
Xayeysiinta Facebook iyo ololayaasha ololaha ayaa aad qaali u ah?
Ma u xanuunsanayaa lahaanshaha "Meelaha La Yaqaan" oo Aan Wax Gaari ah?
Waan fahamsanahay. Oo annaguna waxaan haysannaa waxaad u baahan tahay.
Waxaan tijaabinaa dhammaan taraafikadayada, Nidaamyadeenna AI waxay bartaan oo ay la qabsadaan 24 / 7 si ay u habboonaanta iyo tayada taraafikada ay mar uun u fiicnaadaan ilbiriqsi kasta.
XUQUUQDA AY U SAMEEYAAN XUQUUQDAADA
Dadka soo booqda ee loo soo diro waa dad iyagu daneynaya Nest-kaaga, sidaa darteed fursadda ugu sarreysa ee wada-hadalka.
Waxaan u adeegnay warshadaha in kabadan labaatan sano 2. Aan la tirin karin B2B iyo B2C ganacsiyada ayaa si isdaba joog ah noogu koray annaga sannadaha oo dhan.
Qiimuhu wuxuu qorsheynayaa inuu iibsado taraafikada bogga
200 Soo Booqdeyaasha Maalinlaha ah
100% Soo-booqdayaasha Aadanaha dhabta ah
Cinwaanka IP dhabta ah
Xulashada Bartilmaameedka Niche
200 Visitors Maalinle ah 6 bilood AMA 1000 Soo Booqasho Maalinle ah 1 bil
200 Visitors Maalinle ah 12 bilood AMA 2000 Soo Booqasho Maalinle ah 1 bil
Sare u qaadista Keyword Ranking
Kordhinta Raadinta Wadooyinka
Goynta Qaababka Edge
Ku soo dhowow SEO
WAA MAXAY Macaamiishayadu wax ka dhahaan annaga
SETH - Milkiilaha GOOBTA SHAQADA
Waxaan tijaabiyay taraafikada barta cusub waxaanan dhihi karaa waa tayo, taraafikada bini-aadamka runtiina mar labaad ayey isku dayi doonaan.
LAURA - hantiilaha dukaanka
Waxaan joojinay adeegsiga xayasiinta FB qaaliga ah ka dib markii aan adeegsannay nimankan. Adeeg tusaale ah!
Calaamadee - MAAMULKA SUUQA shirkadda saas
NicheOnlineTraffic waxay bixisaa adeeg weyn oo leh adeeg hufan oo sax ah. Waxay ku dadaalayaan inay ku siiyaan taraafikada aad u baahan tahay, taraafikadooda gabi ahaanba waa amaan iyo run. Runtii waa cajiib, waa isku shaandhaynta ganacsigayga !.
Xuquuqda daabacaadda © 2020 Niche Traffic Online. Dhamaan xuquuqaha ayaa ilaaliya